HAMRAKHABAR | » कोरोनालाई ठिक पार्ने हतियार कहिले बन्ला ? कोरोनालाई ठिक पार्ने हतियार कहिले बन्ला ? – HAMRAKHABAR
कोरोनालाई ठिक पार्ने हतियार कहिले बन्ला ?
यतिबेला विश्वभर मानविय आपत्ति र बिपत्तिको बाढि चलिरहेको छ । विश्व कोरोना भाइरसको रातोजालो भित्र छ । न बाहिर निस्कन सक्छ न खुलेयायाम लड्ननै सक्छ । न कोरोना भाइरस बिरुद्ध लड्ने कुनै हतियार नै तयार गर्न सकेको छ । मानिसहरु कोही यसको संक्रमणको भारी बोकेर मरिमरी बाँचेका छन कोही यसको त्रास बाट आतंकित बनेर मरिमरी बाँचेका छन ।
न कुनै हतियार न कुनै बम बिष्फोट हजारौंले ज्यान गुमाउनु परेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरुलाई नै चुपचाप थुनाई दिएको छ ।
कुनै राष्ट्रसँग कोरोनाका भाइरस लागेको बिरामी निको पार्ने अचुक औषधि छैन । यतिबेला सम्म विश्वभर डरलाग्दो हाहाकार मच्चिएको छ,अस्पतालमा एम्बुलेन्सको लस्करका लस्कर जाम छन , जताततै एम्बुलेन्सको आपतकालिन आवाजहरु सुनिरहेको छ । अस्पतालका कुनैपनि पनि बेड खालि छैन कतिपय देशमा बिमारीहरु भुइँमा लडेर रुदै कराउँदै छट्पटी रहेका छन , रातारात नयाँ अस्पताल हरु थपिएका छन् ती पनि भरिएका छन । सेकेन्ड सेकेन्डमा बिरामीहरु थपिरहेका छन । यसले न ठुलो न सानो कसैलाइ छाडेको छैन । कतिपय देशमा राष्ट्रप्रमुखहरु समेत संक्रमणको सिकार भएका छन ।
आफन्तका तुलना गर्नै नसकिने दुखत क्षणहर
कोरोना भाइरस संक्रमित भएका आफन्तहरुको झन दर्दनाक पीडा छ । न बिरामी भएका आफन्तलाइ स्याहारसुसार गर्न पाउँछ न भेट्ननै पाउँछन न त मलाम नै गर्न पाउछ हामीले भिडियो मार्फत देखियो चिनमा घटेका घटनाहरु आफुले जन्माएको सानो शिशु आमाले छुन समेत नपाएको , आफ्नो बिरामी बच्चा र आमा बुवालाई भेट्न जान लाखौं बिन्ति गर्दा पनि अस्पतालमा खटिएको सुरक्षाकर्मिले भेट्न दिएनन ।
बेलायतमा यस्तै एउटा दुखान्त निधनको समाचारले धेरैलाइ रुवाइ रहेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट २४ घण्टाभित्र बाबुछोरीको ज्यान गएपछि उक्त समाचारले धेरैलाइ भावुक बनायो । नेपाली मुलका वावु र छोरीको निधनमा न कोही मलामी भए न आफन्त नै रुने थिए । मानव जातिको लागी कतिपय यस्ता तुलना गर्नै नसकिने दुखत क्षणहरु हुदा रहेछन आज त्यस्तै क्षणको सामाना विश्वले गरिरहेको छ ।
खडेरीमा सल्केको आगो झै सल्कदै
सन २०२० फब्रेवरी दोस्रो साता तिर कोरिया पसको कोरोना भाइरस छोटो समयमै चिन पछिको दोश्रो प्रकोप प्रभावित राष्ट्र बन्यो । कोरियामा मार्च ५ सम्म आइपुग्दा ६ हजार ८८ जना संक्रमित थिए र ४० जनाको ज्यान गएको थियो । त्यो मितिमा अर्थात मार्च ५ सम्ममा अमेरिकामा जम्मा १ सय ६२ जनामा मात्र कोरोना भाइरस संक्रमित देखिएको थियो र ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । तर हाल एक महिना भित्रको अबधिमा विश्वको धेरै कोरोना संक्रमित राष्ट्र बनेको छ अमेरिका । जहाँ कोभिड संक्रमितको संख्या २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ ।विश्वभर १० लाख ३० हजार संक्रमितको सख्या कटिसकेको छ । जसमध्ये मृत्यु हुनेमा ५५ हजार ,निकोहुनेमा २ लाख २० हजार कटेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्दै छ अझ भयानक संकटहरु आउदैछन । अमेरिकामा मात्रै दुइ बढिले ज्यान गुमाउन सक्ने अनुमान छ ।
तत्कालै ठिक पार्ने हतियार भनेको नियमहरु पालना नै हो
म दैनिक जसो कल्पना गर्छु हाम्रा विश्वका बैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान र परिक्षणहरु बाट यस अगाडीका खतराजन्य महामारी नियन्त्रणहरु गरे । ति महामारीहरु जितेर हामीहरु खुसि हुदै यहाँ सम्म आयौ । तर आज आधा आधि बैज्ञानिकहरुले पनि हार खाइरहेको जस्तो अनुभुति भैरहेको छ । विश्वभरका बैज्ञानिकहरु यसको उचित निराकरण के हुन सक्छ भनेर चिन्तामा छन । हुन त बिभिन्न देशमा यसको खोप परिक्षण पनि भएको छ तर त्यो सफल हुन्छ हुदैन थाहा छैन । सायद यसलाइ ठिक पार्ने कुनै अस्त्र तथा हतियार कुनै न कुनै दिन फेला पर्ने छ भन्ने आशा बैज्ञानिकहरुमा पनि पक्कै छ । हामीले पनि त्यही आशा गरम ।
बैज्ञानिकहरुले समेत हार खाएको दिन हामी निरास हौला नत्र आशा धेरै छ । तर अहिले यसलाइ तत्कालै ठिक पार्ने हतियार भनेको हामीले अपनाउनु पर्ने उच्च सर्तकता नै हो जस्तो लाग्छ । कोरोना रोकथामको लागी भैरहेका तयारीहरुको पुर्ण पालना गरौ ।
सरकारले अगाडी सारेका रणनितिहरुलाइ मानौ त्यही होला अहिलेको हतियार नत्र अरु उपाय के छ त ? न औषधी छ न उपचार छ ?आफु पनि बचौ र अरुलाइ पनि बचौँ भन्ने उदेश्यले यसलाइ रोकथाम गर्न अपनाइएका उपायहरुको कडाइका साथ पालना गरौ । जुन दिन यसलाइ ठिक पार्ने हतियार फेला पर्छ त्यही दिन रमाउलाँ ।
(लेखक सविना कार्की कोरियामा क्रियाशिल नेपाली पत्रकार हुन )